Miyuu Sheekh Mukhtaar Roobow ka baxay Alshabaab? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Miyuu Sheekh Mukhtaar Roobow ka baxay Alshabaab?
Mareeg.com: Sida uu sheegay Zakariya Ismaaciil Xersi (Zaki) oo dhawaan ka baxay Alshabaab, Sheekh Mukhtaar Roobow Cali (Abuu Mansuur), oo ka tirsanaa Saraakiisha sar sare ee Ururka Al Shabaab ayaa ka baxay ururkaas.
Zakariye Ismaaciil ayaa sheegay in Abuu Mansuur uu ku nool yahay dhulka uu deegaan ahaan ka soo jeedo
Wuxuu Zakariye ku tilmaamay Abuu Mansuur shakhsiga keliya ee ugu wanaagsan, uguna garashada badan madaxdii Al Shabaab.
“Sheekh Mukhtaar mar hore ayuu ka tagey Shabaab waa qofka keliya ee siin, caqli iyo waxgaradnimo ka soo haray Madaxdii Shabaab, 3-sano ka hor ayuu ka baxay, wuxuuna ku nool yahay deeganada uu ka soo jeedo.” Ayuu yiri Zakariya Ismaaciil Xersi.
Sidoo kale wuxuu ka hadlay Amiirka cusub ee Ururka Al Shabaab Axmed Diiriye, balse isu magacaabay Sheekh Axmed Cumar Abuu Cubeyda, kaa oo uu ku sheegay mid ku feker ah Axmed Godane.
“Axmed Diiriye gobol ayuu guddoomiye ka ahaa anaga ayuu na hoos taggi jiray, waa nin shaqo badan oo karti badan, mana fillaayo meeshii uu ku jiray Godane inuu buuxin karo, karti ahaan, go’aan adeeg iyo calool adeeg, laakiin waa isku feker” ayuu yiri Zakariye.
Horay waxaa usoo baxay warar sheegaya in Mukhtaar Roobow iyo amiirkii la dilay ee Alshabaab is khilaafeen, islamarkaana uu Roobow saldhig ka dhigtay meel ka mid ah Baay iyo Bakool.
Zakariye Ismaaciil oo ahaan jiray madaxada Aminiyaadka Alshabaab ayaa dhamaadkii sanadkii hore isu soo dhiibay dowladda Soomaaliya, wuxuuna shaaciyey inuu ka baxay Alshabaab.
Gabar ceego lagu dilay oo laga helay degmada Hiliwaa
UN: 25 kun ayaa ku biiray Daacish iyo Al-nusrah